သင့်ရဲ့ အဆုတ်ကျန်းမာသန့်ရှင်းစေဖို့ ဘယ်လိုအစားအစာတွေအဓိက စားပေးသင့်လဲ? – Trend.com.mm
သင့်ရဲ့ အဆုတ်ကျန်းမာသန့်ရှင်းစေဖို့ ဘယ်လိုအစားအစာတွေအဓိက စားပေးသင့်လဲ?
Posted on December 6, 2019 by Noel
ဆေးလိပ်မသောက်ရုံနဲ့ အဆုတ်ကျန်းမာနေပြီပြောလို့မရပါဘူး။ကိုယ်စားနေတဲ့အစားအစာတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေအပေါ်မူတည်ပြီး အဆုတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်းကြည့်ရပါတယ်။တစ်ချို့အစားအစာတွေက အဆုတ်ကိုဆိုးဝါးစေသလို တစ်ချို့အစားအစာတွေကတော့
အဆုတ်ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ကူညီပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် အဆုတ်ကျန်းမာသန့်ရှင်းစေမယ့်အစားအစာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ပန်းသီးဟာ ဗီတာမင်စီ၊ဗီတာမင်အီးနဲ့ Beta-carotene တို့လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် အဆုတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရ တစ်ပတ်ကို ပန်းသီး ငါးလုံး ဒါမှမဟုတ် ငါးလုံးထက်ပိုစားတဲ့အမျိုးသားတွေဟာ မစားတဲ့သူတွေထက် အဆုတ်လုပ်ဆောင်ပုံပိုပြီးကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ တစ်ချို့က ပန်းသီးတစ်နေ့တစ်လုံးစား ကျန်းမာရေးကောင်းလို့ ဆရာဝန်ပြဖို့တောင်မလိုတော့ဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့။
အိုမီဂါသရီးအက်စစ်ပါဝင်တဲ့ငါးများများစားပေးတာက နှလုံး၊ဦးနှောက်နဲ့ အသားအရည်အတွက်လည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် လေ့လာချက်တွေအရ ငါးမှာပါဝင်တဲ့ EPA ဓာတ်ဟာ အဆုတ်ထဲက arachidonic acid level ကို ပုံမှန်လည်ပတ်စေတဲ့အပြင် အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့
အနီရောင်ငရုတ်ပွသီးနဲ့မုန်လာဥတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။အနီရောင်ငရုတ်ပွသီးနဲ့ မုန်လာဥမှာပါဝင်တဲ့ beta-cryptoxanthin ဓာတ်ဟာ အဆုတ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။တရုတ်လူမျိုးအများစုကိုလေ့လာကြည့်ချက်အရ ဒီအစားအစာတွေစားသုံးတဲ့ လူဦးရေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းထိဟာ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းလျော့နည်းတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ချို့သူတွေက ဂျင်းပြုတ်ရည်သောက်ကြသလို တစ်ချို့ကလည်း အစားအစာတွေမှာ အမြဲထည့်သွင်းချက်ပြုတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီဂျင်းဟာ အစားအစာတွေကို ပိုပြီးအရသာရှိစေသလို အဆုတ်ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လည်းကူညီပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်စားသောက်တဲ့အခါထည့်ချက်တာဖြစ်စေ၊တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက် ဂျင်းလက်ဖက်ရည်သောက်ပေးတာဖြစ်စေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်မှာ တွဲဖက်မြင်တွေ့လာရနိုင်တဲ့ Kim Ha Neul နဲ့ Lee Do Hyun
တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်တောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် အချိန်ပေးဖြစ်ရဲ့လား?